I-Covid19 imvulele ibhizinisi - Ilanga News
Home Izindaba I-Covid19 imvulele ibhizinisi
I-Covid19 imvulele ibhizinisi
Usabele kwikhwelo elihlatshwe nguDkt Mkhize
UMNU Sandile Mngadi, ongumsiki wengqephu, uthi izifonyo zakhe zithengwa ubuthaphuthaphu
UMSIKI wengqephu, uMnu Sandile Mngadi (40), wakwa-J eMlazi, useqome ukuthunga izimfonyo zendwangu emuva kokuba uNgqongqoshe wezeMpilo, uDkt Zweli Mkhize, ememezele ukuthi izimfonyo ezaziwa ngama-N95 nama-surgical mask umnyango wakhe sewuzowongela izisebenzi zezempilo kuphela.
UDkt Mkhize uthi amalungu omphakathi angabe eqala ezenzela izifonyo zendwangu.
“Yilapho-ke engibone khona ithuba lokusiza umphakathi ngesikhathi nami ngizenzela amasentshana njengomsiki wengqephu nosomabhizinisi,” kusho uMnu Mngadi.
Uthi ngaphambi kokuba aqale ukwenza lezi zifonyo ezidle ngokuhloba ngemibala emihle, uzinike isikhathi enza ucwaningo kwi-internet.
Uthi ubheke ukuthi kula mazwe aphesheya abehaqwe kakhulu yiCovid-19 sibe khona yini isikhathi lapho nawo aphelelwe khona wuhlobo oluthize lwezifonyo nokuthi eze nasiphi isixazululo emuva kokuhlangabezana naleyo nkinga.
“Ngithole ukuthi nabo kubehlele lokhu okusehlelayo kuleli.
Ngithole ukuthi nabo baqome ukwenza izifonyo zendwangu ukuze bagweme ukusabalala baphinde bazivikele kuleli gciwane,” kusho uMnu Mngadi.
Uqhube wathi uphinde wabheka nokuthi ziphephe kangakanani lezi zifonyo zendwangu, okuyilapho ethole khona ukuthi ziphephile uma indwangu izophindwaphindwa kathathu ukuze zibe wugqinsi ngokwanele.
“Ngibe sengiqala-ke ngizithunga ngisebenzisa ulwazi lwami njengomsiki wengqephu, nalo engiluthole kwi-internet. Ngibe sengizikhangisa ezinkundleni zokuxhumana, ngimangale kakhulu uma ngithola ukuthi abantu bayazithakasela, bafaka nama-oda. Ukusuka lapho-ke kangibange ngisabheka emuva,” kuchaza uMnu Mngadi.
Uthi usebenzisa kakhulu uhlobo lwezindwangu ezaziwa nge-African Print, ezithandwa kakhulu ngabantu esikhathini samanje.
Uthi uthola ama-oda aqhamuka kuyo yonke iNingizimu Afrika, kanti ezinsukwini ezimbalwa ezedlule uthole amakhasimende ambalwa emazweni aphesheya.
Uthi ukuhamba kahle kwaleli bhizinisi kumenze wangafuna ukuba agcine ngokudayisa kuphela, kepha aphinde anikele emphakathini kulabo ababonayo ukuthi bayazidinga lezi zifonyo kodwa kabanayo imali yokuzithenga.
“Ngale kokuzidayisa njengosomabhizinisi, ngibuye ngiphisane ngazo emiphakathini ehlwempu. Kanti i-oda ne-oda engilitholayo uma ikhasimende lithenge eziningi, ngiyaye ngilibhansele ngezinye ngaphezulu, ngiliyalele ukuba liziphe amalungu omphakathi aswele ngalapho lihlala ngakhona,” kuchaza uMnu Mngadi.
Uthi lezi zifonyo azenzayo zithandeka ngoba ziyawasheka ziphinde zisebenziseke ngokuphindaphindiwe.
“Ngaleyo ndlela umuntu osithengile (isifonyo) uyakwazi ukuthi asigqoke usuku lonke bese kuthi ntambama asiwashe, asineke kuse ngakusasa sesomile, asi-ayine, aphinde akwazi ukusisebenzisa futhi. Ngaleyo ndlela kongeka imali ngoba kawusilahli, uphinde uthenge esinye,” kuchaza uMnu Mngadi.
Uthi ngosuku wenza izifonyo ezingaphezulu kuka-50 kanti kumthatha imizuzu ewu-20 ukwakha isifonyo ngasinye. Uthi isifonyo usibiza u-R50 ngasinye.
Previous articleMakungabi nokwenzelela kwabaphula oweCovid19
Next articleNabu ubumqoka be-lockdown